प्रभु बैकको नाफा ५८ प्रतिशतले वृद्धि गरी १ अर्ब ४५ करोड कमायो
काठमाडौं । प्रभु बैकले तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १ अर्ब ४५ करोड २१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जुन गत वर्षको सोहिअवधिको तुलनाभन्दा ५८ दशमलव ३५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको..
सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत
काठमाडौं । सरकारले सबै किसिमका आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न जोड दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने घोषणा गरेको..
एनआईसी एसिया बैंकको कार्डबाट ‘खल्ती’मा पैसा राख्दा १० प्रतिशत बोनस पाईने
काठमाडौं । राष्ट्रिय आईसीटी दिवस २०१९ को अवसरमा खल्ती र एनआईसी एशिया बैंकले एक विशेष बोनस अफरको घोषणा गरेका छन्। उक्त अफरमा बैंकद्वारा जारी क्रेडिट तथा डेबिट कार्डहरू प्रयोग गरेर खल्ती..
९ महिनामा सनराइज बैंकको नाफा १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । सनराइज बैंकले एक वर्षको अन्तरालमा २८ करोडले नाफा बढाएको छ। यस आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकले १ अर्ब २२ करोड खुद नाफा कमाएको छ। गत वर्ष ९४ करोड..
ग्लोबल आइएमई बैंकको नाफा साढे ३२ प्रतिशतले बढ्यो, कति छ प्रति सेयर आम्दानी ?
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार यो अवधिमा १ अर्ब ८७ करोड २१ लाख..
नेपाल बैंकले ९ महिनामा दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ नाफा कमायो
काठमाडौं। नेपाल बैंकको पुषको तुलनामा ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँले निक्षेप घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम भन्दा माथि स्प्रेडदर हुँदा बैंकको नाफा ९ महिनामै दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ..
एनआईसी एशिया बैंकका ८ नयाँ शाखा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले उपत्यका भित्र तीन,काभ्रेमा एक, पोखरामा एक, नुवाकोटमा दुई र पर्सामा १ गरि ८ नयाँ शाखा खोलेको छ। पोखरा अमरसिंह चोक शाखाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका..
सानिमा बैंकको ९ महिनाको नाफा एक अर्ब ५७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । सानिमा बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एक अर्ब ५७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्षको चैत मसान्तमा बैंकले एक अर्ब २० करोड..
एसबिआई बैंकले नाफा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कमायो
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकको खुद नाफा १६ प्रतिशतले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म एक अर्ब ३७ करोड ९७ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको खुद नाफा एक अर्ब..
सिद्धार्थ बैंकको ९ महिनाको नाफा एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म नाफा १५ प्रतिशतले वृद्धि एक अर्ब ५९ करोड २९ लाख २७ हजार रुपैयाँ कमाएको छ। बैंकले नाफा चैत मसान्तसम्ममा एक अर्ब ५९..
युएईबाट रेमिट्यान्स पठाउने परिवारले विनाधितो ऋण पाउने, ऋण लिन के गर्नु पर्छ ?
काठमाडौं। युनाइटेड अरव इमिरेट्स 'युएई'बाट रेमिट्यान्स पठाउनेले लक्ष्मी बैंकबाट विनाधितो दुई लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पाउने भएका छन्। युएईको अल फर्दान एक्सचेन्ज मार्फत नेपालमा रमिट्यान्स पठाउँदा उनीहरुका परिवारले दुई वर्षका लागि..
एन आई सी एशिया बैंकले खोल्यो एकैदिन ५ वटा नयाँ शाखा
काठमाडौ । एन आई सी एशिया बैंकले काठमाडौं उपत्यका भित्र र बारा जिल्लाको फेटामा समेत गरी ५ नयाँ शाखा खालेको छ । नयाँ शाखा कार्यालयहरुमा मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा थिमी शाखा, कागेश्वरी..
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको नाफा २५५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले तेस्रो त्रैमाससम्म चार करोड ८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गतबर्षको यसै अवधिको तुलनामा लघुवित्तको खुद नाफा २५५.७१ प्रतिशतले बढी हो । लघुवितको..
एभरेष्ट बैंकको ९ महिनाको खुद नाफा १८ प्रतिशत बढ्यो, २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कमायो
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले गत आवको यसै अवधिमा एक अर्ब ८७ करोड २० लाख खुद नाफा आर्जन गरेको बैंकको नाफा २ अर्ब २१ करोड ६० लाख पुगेको हो। बैंकको खुद नाफाबाट..
मेगा क्यापिटल औपचारिक सञ्चालनमा, मेगा बैंकबाटै सेवा पाइने
Posted on Apr 21 2019
काठमाडौं । मेगा क्यापिटल मार्केटस् लिमिटेड औपचारिक सञ्चालनमा आएको छ। मेगा बैंकको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको क्यापिटलको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्की र मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले..
माछापुच्छ्रे बैंकले ९ महिनामा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ नाफा कमायो
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा एक अर्ब २४ करोड रुपैंया नाफा कमाएको छ । बैंकले यो आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कमाएको यस्तो नाफा मात्रै ४५ करोड ९४..
सिटिजन्स बैंकको ९ महिनामा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सिटिजन्स बैंकले तेस्रो त्रैमासिक अवधीको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै १ अर्ब ६ करोड नाफा गर्दै..
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र सहकारी संस्थाबीच सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र भरपर्दो कृषक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार सहकारीका सदस्य विद्यार्थीहरुको लागि इन्स्योरेन्सले आइजीआई विद्याथी बीमालेख मार्फत सेवा दिने छ। जसअनुसार सहकारीमा..
सबै नेपालीलाई बैंक खाता अभियान: वित्तीय पहुँचको आधार
काठमाडौं । विक्रम संवत् २०७६ को पहिलो दिन, आम नेपाली नयाँ वर्षको स्वागतमा रमाइरहेका थिए। चैत–वैशाख, वसन्त ऋतु अर्थात् बोटबिरुवामा समेत नयाँ कोपिला लाग्ने मौसम। यही अवसरमा सरकारले नववर्ष कै..
राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई १ अर्ब ३२ करोड भत्ता बाँड्यो, तलबभन्दा २२० प्रतिशत बढि भत्ता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले तलबभन्दा बढी २२० प्रतिशतसम्म भत्ता लिने गरेको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले तलबको तुलनामा २२० प्रतिशतसम्म भत्ता..
एलआईसि नेपालको ‘धनवृष्टि’ बीमा योजना, दुर्घटनामा ७५ लाख सम्म पाउने
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालले ‘धनवृष्टि’ नामक जीवन बीमा योजना सार्वजानिक गरेको छ । इन्स्योरेन्सले विहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी ७५ लाख रुपैयाँ सम्मको दुर्घटना लाभ सहित हरेक ३ वर्षमा..
ग्लोबल आइएमई बैंकका ५ नयाँ शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले विभिन्न जिल्लामा थप ५ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंकले रोल्पाको परिवर्त गाँउपालिका , रोल्पाकै इरिवाङ्ग, थवाङ्ग गाउँपालिका – २, ठूलोगाउँ, ईलामको शुर्योदय नगरपालिकाको..
कृषि विकास बैंकको २१ प्रतिशत लाभांस साधारण सभाबाट पारित
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको साधारण सभाले लगानीकर्तालाई बितरण गर्ने भनी प्रस्ताव गरेको २१ प्रतिशत लाभांस पारित गरेको छ । बैंकको केन्द्रिय तालिम प्रतिष्ठान बोडे भक्तपुरमा आज शुक्रबार सम्पन्न साधारण सभाले..
नविल बैंकले ३.९४ प्रतिशत व्याजमा नारीलाई ऋण दिन ल्यायो ‘नविल नारी’ प्याकेज
Posted on Mar 28 2019
काठमाडौं । नविल बैंकले नविल नारी प्याकेज ल्याएको छ। नारीहरुका लागि यो प्याकेज पूर्ण रहेको बैंकले जनाएको छ। यस प्याकेजअन्तर्गत नविल प्रिमियम नारी बचत, नविल नारी कर्जा र ‘वुमन रन माइक्रोइन्टर..
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटबीच सम्झौतापत्र
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटबीच सम्झौतापत्र भएको छ । सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्जीव..
सिटिजन्स बैंकको सिइओमा गणेशराज पोखरेल नियुक्त
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा गणेशराज पोखरेल नियुक्त भएका छन् । बैंकको चैत ११ बसेको संचालक समितिले कामू प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका पोखरेललाई चारवर्षसम्म कार्यकाल रहने गरेर..
तीन वर्षसम्म बैंक खाता नचलाए के हुन्छ ?
काठमाडौं । बैंकमा खोलिएको बचत खाताबाट तीन वर्षसम्म कुनै कारोबार नभए स्वतःनिश्क्रिय हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको आग्रहमा बचत खाताको निश्क्रिय अवधि बढाएको हो। यसअघि ६ महिनासम्म कुनै कारोबार नभएको..
महिला सहयात्रा लघुवित्तले संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा १ लाख डलरको ग्लोबल अवार्ड पायो
काठमाडौं। महिला सहयात्रा माईक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था “राजकुमारी सविकाविन्त अब्राहिम अल–खालिफा ग्लोवल अवार्ड” द्वारा सम्मानित भएको छ। सार्वजनिक संस्था, निजी, गैर सरकारी र स्वतन्त्र गरि चार विधामा विभिन्न मुलुकका १८ सय ८७..
राष्ट्र बैंकले आज १३ अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज १३ अर्ब ७९ करोड ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको टे«जरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले आज एक सूचनामार्फत उक्त परिमाणको टे«जरी बिल..
एनआईसी एशियाको नयाँ शाखा सिरहाको गोलबजारमा
काठमाडौंं । एनआईसी एशिया बैंकको गोलबजार नगरपालिका वडा नं ४, सिरहामा नयाँ शाखा खुलेको छ। शाखाको उद्घाटन गोलबजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवनाथ शाहले गरे।बैंकका देसभर २७७ शाखा, २८९ एटिएम, ३८ एक्सटेन्सन..
Results 1896: You are at page6of 64